A healthy sleep pattern ensures the next day full of energy esp for working adults and heavy load students. Sleep hygiene isahabitual activity that helps us fall asleep and maintain healthy sleep. न्यून निन्द्राको स्वच्छता निद्राको गुणस्तरमा बाधा पुर्‍याउन सक्छ. Hence considered most people lack healthy sleep we hope the below small tips useful before you go to bed.
सबैजना राम्रो निद्रा बानी राख्न चाहन्छ, तर प्रविधिको विकासको साथ, the quality of people's sleep has been declining. त्यसो भए, निन्द्राको गुणस्तरलाई असर गर्ने कारकहरू के हुन्? निद्राको गुणस्तर सुधार गर्न हामी के गर्न सक्दछौं? वास्तबमा, निद्राको गुण बाह्य वातावरण र तपाइँको आफ्नै खाने बानीसँग सम्बन्धित छ, वातावरण सहित, समय, गतिविधि र सेवन.
जहाँ हामी सुत्दछौं निद्राको लागि राम्रो हुनुपर्छ. कोठा शान्त हुनुपर्छ, कालो र तापमान मा मध्यम. यदि तपाईं कामको कारण दिनको समयमा मात्र सुत्न सक्नुहुन्छ, अस्पष्ट पट्टि प्रयोग गर्नुहोस्, shadows, or curtains. यो बाटो, if the light comes in through the window, it won't hit your eyes. शान्त वातावरणमा सुत्न नसक्नेहरूको लागि, तपाईं निदाउन मद्दत गर्न तपाईं सुखदायक संगीत प्ले गर्न सक्नुहुन्छ.
ओछ्यान सुत्ने वातावरणको एक महत्त्वपूर्ण अंश हो. This includes pillow-top mattresses, जग र ओछ्यान. गद्दे सहयोगी हुनुपर्दछ, जो संयुक्त दबाव कम गर्न सक्छ. पछाडि र घाँटी पछाडि राम्रोसँग पigned्क्तिबद्ध हुनुपर्छ. आधुनिक गद्दा डिजाइनको विकास समर्थन र दबाव दबाव बीच उचित सन्तुलन प्राप्त गर्न को लक्ष्य हो. गद्दा छनौट गर्दा, तपाईंको वजन र शरीरको प्रकारको साथ साथै तपाईंको शारीरिक अवस्थालाई पनि विचार गर्नुहोस्, कमर दुख्ने सहित, घाँटी दुखाई, गठिया, बर्साइटिस, निन्द्रा मा स्वास फेर्न नसक्नु, र फाइब्रोमाइल्जिया.
हाम्रो शरीर एक सर्काटियन ताल संग डिजाइन गरीएको छ, २ up-घण्टा चक्र जब हामी उठ्छौं र खस्दछौं, स्थिरतामा निर्भर गर्दै. जब हामी घण्टा भित्र धेरै समय क्षेत्रहरूमा ठाउँहरूमा पुग्दछौं, हाम्रो शरीर गन्तव्य मा स्थानीय समय संग सिंक बाहिर थियो. हामी समय परिवर्तनको कारण जेट ल्यागलाई कारण दिन्छौं. यदि तपाईले केहि हप्तामा पाली परिवर्तन गर्नुभयो भने, जतिसक्दो चाँडो आफ्नो निद्रा समय समायोजित गर्न सुरू गर्नुहोस्.
सुत्न भन्दा पहिले दुई देखि चार घण्टा सम्म, कडा गतिविधि बाट शान्त गतिविधिमा सर्दा तपाईंलाई आराम गर्न अनुमति दिन्छ. दिनमा व्यायाम गर्नुहोस् र रातमा कडा व्यायाम कम गर्नुहोस्. सुत्ने बेला भन्दा आधा घण्टा टिभी बन्द गर्नुहोस्, एउटा किताब पढ्नुहोस् वा फोटोहरू ब्राउज गर्नुहोस्, र इलेक्ट्रोनिक स्क्रीन उपकरणहरु लाई छुने बाट बच्नुहोस्. यदि आवश्यक छ भने, तपाईं दिनमा एक झपकी लिन सक्नुहुन्छ र तपाईंको खाजा ब्रेकमा सीमित गर्न सक्नुहुन्छ 30-45 मिनेटहरू छ कि यसले तपाइँको नियमित निद्रामा असर गर्दैन.
सुत्ने समयको नजिक हाम्रो खानाले हामी कसरी सुत्छौं भनेर असर गर्छ. यदि तपाईं सुत्नु भन्दा एक घण्टा सम्म भोकै हुनुहुन्छ भने, कृपया हल्का खाना तयार गर्नुहोस्, but not suitable for high-calorie foods, जसले निद्रा र सुत्ने समयको गुणस्तरलाई असर गर्दछ. कफी र अन्य क्याफिनयुक्त पेयहरू बिहान उठ्नको लागि उत्कृष्ट हो किनकि यसले तपाईंलाई जगाउन मद्दत गर्दछ, तर उही कारणको लागि, तिनीहरू सुत्न पहिलो तीन वा चार घण्टा को लागी राम्रो विकल्प छैन.
हाम्रो नियन्त्रण बाहिरका कारकहरू
हामी निन्द्राउने तरिकालाई असर गर्ने धेरै कारकहरू हाम्रो नियन्त्रणमा छन्. But when we can't control certain key components of sleep hygiene, हामीले राम्रो निद्राको गुणस्तर प्राप्त गर्न समायोजनहरू आवश्यक छ. हामी मध्ये धेरै को लागी, अरूले नियन्त्रण गर्ने कारकहरू मध्ये एक हाम्रो काम र वर्ग समय हो. छोटकरीमा, राम्रो निद्रा प्राप्त गर्न र दिनको बखत हामीलाई जागा र सतर्क राख्न, we need to control what we can do and adjust what we can't. पक्कै पनि,agood mattress will help you sleep well, too. यसैले, we recommend this model - spring and memory foam hybrid mattress to these who are troubled in sleeping.
ट्यागहरू: सोफा सेट किन्नुहोस्, वसन्त गद्दा
पोष्ट समय: 2020-04-15